ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် ပထမနှစ် စတင်တက်ရောက်ခွင့်ရ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အဆောင်နေထိုင်ခွ - Yangon Media Group
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် ပထမနှစ် စတင်တက်ရောက်ခွင့်ရ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အဆောင်နေထိုင်ခွ
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် ယခုပညာသင်နှစ် ၌ပထမနှစ်စတင်တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသောကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များအနေဖြင့် အဆောင်နေထိုင် ခွင့်ကို နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်မှစတင် ပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၂ဝ၁၈- ၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ဘွဲ့ကြိုသင် တန်း (ပထမပညာသင်ကာလ)အ တွက် တက်ရောက်ခွင့်ရရှိထား သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များထဲမှ အဆောင်နေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားသူများကို ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ)ရှိ ကေတု မတီဆောင်များနှင့်မြတ်လေးဆောင် များတို့တွင် နေထိုင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ် ကြောင်း အဆောင်နေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းများကို နိုဝင် ဘာ ၁၅ ရက်မှစတင်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်အထိ လျှောက်ထားနိုင် ကြောင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ သိရ သည်။
အဆောင်နေထိုင်ခွင့်လျှောက် ထားသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူများအနေဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ)ရှိ သင်တန်းရေးရာ ဌာနနှင့်ဒုတိယနှစ်နှင့် အထက် သင်တန်းသားများသည် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရေးရာဌာန နှင့်ကျောင်းဆောင်များဌာနတွင် ပုံစံများထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း လျှောက် ထားသူများထဲမှ လစ်လပ်နေရာ များကိုသာ အဆောင်ချထားပေး မည်ဖြစ်သည့်အတွက် အလျင်ဆုံး လျှောက်ထားသူများကိုသာ ဦး စားပေးရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လျှောက်ထားလိုသည့် ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများသည် ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ် နိမိတ်ပြင်ပနှင့်အခြားတိုင်းဒေသ ကြီးပြည်နယ်များတွင် နေထိုင်သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများဖြစ် ရန်လိုအပ်ပြီး ကျောင်းဝင်ခွင့်မှတ် ပုံတင်ပြီးကြောင်း အထောက်အ ထားသတ်မှတ်ထားသော ကျောင်း စည်းကမ်းနှင့်အညီ နေထိုင်နိုင်သူ များလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိ ရသည်။ ယခုပညာသင်နှစ်အတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ဘွဲ့ ကြိုသင်တန်း၊ဘာသာရပ် ၂၆ ကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၁၉ဝဝ ကျော်ဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ကျောင်းဝင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုမည့်ရက်မှာ နိုဝင် ဘာ ၁၇ ရက် နောက်ဆုံးထားပြု လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
စစ်ကိုင်းမြို့ ကိုးပေတံတား ပတ်ဝန်းကျင် ရေနစ်မြုပ်မှု မရှိစေရန် ငွေကျပ်သိန်း ၅ဝဝ အကုန်အကျခံ??
ပွဲချိန်ပြည့် စော်ကားခံရသည့် အတွက် ပြန်တုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းဟု မော်ရင်ဟို ရှင်းလင်း
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် (၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အမေရိကန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီ?
ကစားသမားသစ် ပီပီ ပွဲကစားခွင့် ပိုရလာမည်ဟု အမ်မရီပြောကြား
မီဒီယာသည် အစိုးရ၏ လက်ကိုင်တုတ် ဖြစ်စရာမလိုသကဲ့သို့ အစိုးရ၏ မိတ်ဆွေဖြစ်စရာ မလိုသလို၊ အစိုး??